के तपाईको ‘प्रेसर लो’छ ? यी १० खानेकुरा खानुहोस् – Jagaran Nepal
के तपाईको ‘प्रेसर लो’छ ? यी १० खानेकुरा खानुहोस्
काठमाडौँ। ब्लड प्रेसर लो भएका बिरामीहरुले आफ्नो खानेकुरामा विशेष ध्यान दिन अत्यावश्यक छ । खानपानमार्फत नै यसलाई सामान्य बनाउन सक्नुहुन्छ ।
१) पात भएको सागसब्जीः
२) डार्क चक्लेटः
४) बिना बोसोको मासुः
५) रसिलो पोषिलो झोल पदार्थ :
७) कालो खाद्य पदार्थः
८) अमिलो खाद्य पदार्थः